h2h Archives - Nanmalgyi
ဦးနှောက်မရှိလို့ အဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ သူခိုးများ
April 23, 2019 Yuki 0
1 လူတိုင်း နီးပါး အိမ်မဟုတ်တဲ့ တခြားနေရာမှာ အိပ်ငိုက်ဖူးပါတယ်။တချို့ကတော့ အလုပ်မှာပါ အိပ်ပျော်ကြပါတယ်။ဒါကိစ္စမရှိပါဘူး။အလွန်ဆုံး အလုပ်ပြုတ်ရုံပါပဲ။1996 ခုနှစ် ဂျူလိုင် 16 ရက်မှာတော့ Robert Downey Jr. ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ ဘေးအိမ်က ခရီးသွားတုန်း သူတို့အိမ်ကို ဝင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့အိမ်မှာ ပစ္စည်းခိုးမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါ။ဒါပေမယ့် ရှာဖွေရင်းတွေတာကတော့ […]
သဘာဝတရားကြီးကသာ ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ ခမ်းနားလှပတဲ့အခြေအေနေတွေ
ဒီပုံကို လူတိုင်းတော်တော်များများမြင်ဖူးမှာပါ။ပုံကို ပြုပြင်ထားတယ်လို့လည်း သံသယရှိကြမှာပါ။တကယ်တော့ ဒီနေလုံးစိမ်းစိမ်းကြီးဟာ တကယ့်အရာကြီးဖြစ်ပြီး တခါတလေ ကမ်းရဲ့ တဖက်ကနေ ပြူထွက်ကာစအချိန်နဲ့ နစ်မြုပ်သွားချိန်တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကို နေရဲ့ အလင်းပြန်မှုလို့ခေါ်ပြီး အစိမ်းရောင်အစက်အပြောက်တွေရဲ့ အဆီးအတားကြားမှာ အရောင်ပြောင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာဇီးက Pororoca လူသိများတဲ့ဒေသမှာ အမေဇုံနဲ့ ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ မြစ်ကလေးရှိပါတယ်။လှိုင်းတွေက ဘယ်တော့မှ ဆုံးခန်းမတိုင်ပါဘူး။800 […]
ဟစ်တလာ စစ်ကြီးအပြီးမှာ တကယ်သေခဲ့လို့လား…
10 Patagonia ဆိုတဲ့ ဒေသအစိတ်အပိုင်းလေးဟာ အာဂျင်တီးနားမှာရှိပြီးတော့ အဲ့ဒီနေရာမှာ နေထိုင်သူတွေဟာ ဂျာမာန်မျိုးနွယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာ နာဇီဝါဒီကို ယုံကြည်ကြသူတွေဖြစ်ပြီး ဘယ်စစ်ပွဲမှာမဆို ကျန်ရစ်သူတွေဟာ နာဇီတွေသာဖြစ်မယ်လို့ ယုံကြည်ထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ ဟစ်တလာအတွက် တချို့အရာတွေက အထူးစည်းရုံးစရာမလိုဖြစ်ခဲ့ပြီး Patagonia ကို သိမ်းရဲ့ သူ့ဆီက အပိုင်းအစဖြစ်လာပါတယ်။ဒီတော့ စစ်ကြီးသာ ပြီးမယ်ဆိုရင် သူနေဖို့အတွက် […]
ပြင်သစ် အီဖယ်လ်မျှော်စင်ကြီးရဲ့ သင်မသိသေးတဲ့အကြောင်းတွေပြောပြနေသောဓါတ်ပုံများ
ပြင်သစ် နဲ့ ပဲရစ်ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်တာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ပထမဆုံးပြေးမြင်မိမှာကတော့ အီဖယ်လ်မျှော်စင်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပဲရစ်သားတွေကတော့ မတည်ဆောက်ချင်ခဲ့ဘူးဆိုတာ သင်သိပါသလား။ ဆောက်လုပ်ဖို့စီမံကိန်းကို ဆန္ဒပြတယ်ဆိုတာရော သိပါသလား။ ၁၈၈၉ခုနှစ် ပေါ်လစီအပြောင်းအလဲမှာ ပြင်သစ်အစိုးရဟာ ဖြိုခဲ့ချင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား။ဒါပေမယ့် ဒီကနေ့အထိ မျှော်စင်ကြီးက အခိုင်အမာတည်ရှိနေခဲ့တုန်းပါ။ ကမ္ဘာ့အထင်ရှားဆုံး လူလုပ်အဆောက်အဦးတစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းဝင်နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် […]
သင်ရော သင့်ကလေးတွေပါ မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်ရင့်သန်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်းလမ်းများ
လက်ရှိလူနေမှုစနစ်မှာ လူတွေဟာ အသက်ရွယ်မကြီးရင့်ခင် မှတ်ဥာဏ်မကောင်းတော့ပါဘူး။အစားအသောက် အနေအထိုင်နဲ့ လွယ်ကူလွန်းတဲ့ စက်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။နည်းပညာဟာ ဘာမှ လုပ်စရာတောင်မလို လူတွေကို သက်သာချောင်ချိစေခြင်းကလည်း ပြဿနာပါပဲ။ဒီတော့ မှတ်ဥာဏ်တိုးတက်အောင် လုပ်နည်းတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. ဦးနှောက်နဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ် စဉ်းစားရတဲ့ ပဟေဌိတွေ ဖတ်ပါ။အဖြေရှာပါ။ဂဏာန်းသင်္ချာတွက်ပါ။တချို့သော မေးခွန်းတွေကို သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဝိုင်းဖွဲ့အဖြေရှာပါ။ဒါဟာ ဦးနှောက်ရဲ့ […]
ဘယ်တော့မှ မပုပ်မသိုးတဲ့ သင်နေ့တိုင်းစားနေတဲ့ အစားအစာများ
10 ဆန်တွေကို ထားသိုဖို့ အကောင်းဆုံး အပူချိန်ကတော့ 45 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကို ပလတ်စတစ်အိပ်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆာလာအိတ်နဲ့ ပုံးတွေထဲ ထည့်ထားလို့ ရပါတယ်။လေ့လာချက်အရ ဆန်ဟာ နှစ် 30 အထိ ကြာရှည်ခံပြီး အာဟာရဓာတ်လဲ ပေါ့ပျက်မသွားဘူးဆိုပါတယ်။ 9. နွားနို့မှုန့်တွေဟာလည်း အေးပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ စနေရာမှာ ထားရင် […]
1 Eufrat Mai ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်လေးဟာ မော်ဒယ်တစ်ဦးပါ။သူမဟာ သူမရဲ့ ရုပ်ကြောင့် ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက်ကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့တာမဟုတ်ပဲ သူမရဲ့ အမျိုးသမီးအင်္ဂါကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်.။လူကြီးကစားစရာ စက်ရုံက သူမရဲ့ ကိုယ်အင်္ဂါဒီဇိုင်းကို ကမ်းလှမ်းပြီး အမျိုးသမီး အင်္ဂါတုတွေ ထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါက စပိန်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ သူမဟာ ရုပ်မပြပေမယ့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ အားပေးမှုကို […]
ရုပ်ရှင်တွေမှာ ပုံစံငယ်တွေတည်ဆောက်ပြီး အစစ်နဲ့ မခြားရိုက်ပြမှုတွေ
1. Titanic Titanic ကို ဖန်တီးတော့ 45 ပေရှည်တဲ့ သင်္ဘောပုံစံတုကို ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပင်လယ်တုကိုပါ ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုမှ လှိုင်းနဲ့ လေပုံစံထည့်ခဲ့ပတာ သင်္ဘောကြီး နစ်မြုပ်သွားဟန်ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2. Inception Christopher Nolan ရဲ့ Inception ရုပ်ရှာင်ကားကို ရိုက်တော့ သူ့ရဲ့ […]
သင့်ထင်မြင်ယူဆချက်တွေ မှားမှန်း သိစေနိုင်မယ့် ဗဟုသုတအကြောင်းအရာများ
10. လူတိုငးက6packs ရဖို့ လျေ့ကင့်ခန်းပုံမှန် ပြင်းထန်စွာ လုပ်ရတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့ သင်ဟာ ပြေးတာမျိုး နေ့တိုင်း နာရီဝက် တနာရီလောက် လုပ်ပေးရင်6packs ရပါတယ်။အချိန်တော့ အတော်ကြာပါတယ်။ 9. ကွန်ပြုတာ အသုံးပြုသူတိုင်းသိတဲ့ ကီးဘုတ်ခလုတ်က F နဲ့ […]
သမိုင်းဝင်စတန့်တွေလုပ်ခဲ့တဲ့ သတ္တိရှင်အမျိုးသမီး ၁၀ဦး
၁ Annie Edson Taylor – Niagara ရေတံခွန်ပေါ်ကနေ စည်ပိုင်းစီးခဲ့သူ(ပထမဆုံးအကြိမ်) Annie Edson Taylor ဟာ Niagara ရေတံခွန်ကို ပထမဆုံးသွားခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် စည်ပိုင်းနဲ့စီးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးသောလူသားဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့ဘ၀သက်တမ်းကို ဆရာမနဲ့ dancer အဖြစ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူမရဲ့စည်ပိုင်းစိတ်ကူးကြောင့် […]